Asia Archives • Fahalalana FAHOMBIAZANA
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana3472 hevitra
Vakio haingana Mandanja ny fiantraikan'ny tambajotra PHE ireo mpitsabo
Edith NgunjiriElizabeth Tully MEY 25, 2022
Tamin'ny volana martsa 2021, Fahombiazana fahalalana sy Blue Ventures, fikambanana miaro ny ranomasina, Niara-niasa tamin'ny faharoa tamin'ny andiana fifanakalozan-dresaka entin'ny vondrom-piarahamonina momba ny fifandraisan'ny olona-Planet. Ny tanjona: mba hamantarana sy hanamafisana ny fianarana sy ny fiantraikany ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana760 hevitra
Vakio haingana Fandrindrana Fianakaviana alohan'ny fanambadiana sy torohevitra momba ny fahasalaman'ny fananahana any Bangladesh
Pranab Rajbhandariny. K. Shafiqur Rahman Aprily 27, 2022
Bangladesh no manana taha ambony indrindra amin'ny fanambadian'ny ankizy any Azia. Ny fanambadiana aloha loatra dia mitarika ho amin'ny fiainana mahantra kokoa ho an'ny zazavavy. Manimba ny fahafahany misafidy sy ny fahafahany mahazo na manohy fianarana izany. Noho izany, ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana1340 hevitra
Project News Tanora mandray anjara amin'ny heviny: Saripikan'ny traikefa any Azia
Pranab Rajbhandari Aprily 22, 2022
Tamin'ny martsa 22, 2022, Ny Fahalalana SUCCESS dia nampiantrano ny Tanora Mandray anjara mavitrika: Saripikan'ny traikefa any Azia. The webinar highlighted experiences from four organizations in the Asia region working to co-create youth-friendly programs, ensure quality FP/RH ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana1303 hevitra
Vakio haingana Mpiandry fahaterahana mahay: The Last Mile Link
Mehreen Shahid Aprily 12, 2022
Safe Delivery Safe Mother aims to address high fertility and reduce maternal mortality in Pakistan. Vao haingana, the group implemented a pilot project that trained over 160 government-deployed Skilled Birth Attendants (SBAs) in the Multan district ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana1527 hevitra
fifandraisana Vakio haingana Miantoka ny fitohizan'ny serivisy FP/RH tena ilaina mandritra ny vonjy taitra
Grace Gayoso PassionPranab RajbhandariArnita lehibe ny diabe 15, 2022
Tamin'ny Novambra-Desambra 2021, fandrindrana ny fianakaviana sy ny fahasalamana ara-pananahana (FP/RH) Ny mpikambana ao amin'ny mpiasa monina any Azia dia nivory saika ho an'ny vondrona fahatelon'ny Fahalalana SUCCESS Learning Circles. Nifantoka tamin'ny lohahevitra hiantohana ny fitohizan'ny zava-dehibe ny vondrona ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana1107 hevitra
In-Lalina Ny Fikambanan'ny Fandrindrana Fianakaviana Nepal dia tsy mamela na iza na iza
Pranab RajbhandariDr. Naresh Pratap KC février 15, 2022
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana2154 hevitra
Connecting the Dots Between Evidence and Experience combines the latest evidence with implementation experiences to help technical advisors and program managers understand emerging trends in family planning and inform adaptations to their own programs. ny ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana11064 hevitra
Q&ny Ny International Youth Alliance for Family Planning dia manosika ny AYSRH handroso
Brittany Goetsch, Mpiandraikitra Programa SUCCESS fahalalana, vao haingana no niresadresaka tamin'i Alan Jarandilla Nuñez, ny Tale Mpanatanteraka ny International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP). Niresaka momba ny asa ataon'ny IYAFP mifandraika amin'ny AYSRH izy ireo, ny ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana1402 hevitra
In-Lalina Fanatsarana ny fampiasana fanabeazana aizana amin'ny ray aman-dreny tanora voalohany
Mukesh Kumar SharmaDevika VargheseDeepti MathurHitesh SahniEmily Das Novambra 3, 2021
Miaraka amin'ny fitomboan'ny tanora sy ny tanora ao India, ny governemanta ao amin'ny firenena dia nitady ny hamaha ireo fanamby miavaka amin'ity vondrona ity. India’s Ministry of Health & Family Welfare created the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) FANDAHARAM-POTOANA ...
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana2969 hevitra